Waa maxay macnaha dahabka platinum ka samaysan Kamboodiya? - Falanqaynta sayniska
Marka loo eego wixii aan soo xusnay intii aan daraasadda ku jirnay, ma jiraan wax dahab ah oo dhab ah oo loo yaqaan 'platinum' oo ku yaal Cambodia. Dadka Kambodiya waxay si khaldan u isticmaalaan ereyga "Platinum" ama "Platine" si ay u sharxaan macdanta birta oo ay ku jirto boqolley dahab ah.
Waxaan ka iibsannay dahabka qurxinta magaalooyin kala duwan iyo dhowr nooc oo dukaanno ah si aan si sax ah u go'aamino waxa birtaani ay tahay. Waxaan sidoo kale dhagaysannay iibiya kaste si aan u fahamno sharraxaadooda, waana kuwan natiijooyinka aan helnay.
Tirooyinka aan bixino waa celcelis ahaan macluumaadkana waa kuwa ugu saxsan intii suurtagal ah. Si kastaba ha noqotee, natiijooyinka baaristeena maahan inay u dhigmaan natiijooyinka dhammaan waxyaalaha dahabiga ah, waxaa laga yaabaa inay jiraan waxyaabo ka reeban.
Waa maxay platinum dhabta ahi?
Platinum Standart (lambarka 3)
Tirada Platinum 5 iyo 7
Tirada Platinum ee 10
Faa'iidada iyo faa'iido darrooyinka dahabka
Faa’iido darrooyinka dahablaha
Faa'iidada iyo faa'iido darrooyinka macaamiisha
Faa’iido darrooyinka macaamiisha
Platinum-ka dhabta ahi waa dabool, labajibbaaran, oo la arki karo, bir bir-cad ah. Platinum-ductile waxay ka badan tahay dahabka, qalinka ama naxaasta, sidaa darteed waa ductile ugu badan ee biraha saafiga ah, laakiin way ka yar tahay dahabka.
Platinum waa shey kiimiko ah oo leh calaamadda Pt iyo atomic lambarka 78.
Illaa iyo hadda, waligeen kama helin walxaha dahabka ah ee platinum-ka dukaan kasta oo dahabka lagu iibiyo oo ku yaal Cambodia. Laakiin taasi micnaheedu maahan inaysan macquul ahayn in la helo
Dahabka vs Platinum
Dadka Kamboodiya waxay adeegsadaan erayga "Meas" oo keliya inay kaga hadlaan dahab saafi ah. Laakiin dahab saafi ah ayaa aad ugu jilicsan codsiyada dahabka.
Haddii jawharad lagu sameeyay dahaarka dahabiga ah ee macdanta leh biraha kale, looma tixgeliyo inuu yahay "Meas", laakiin waa "platinum".
Qofna ma oga asalka dhabta ah ee isticmaalka magaca “Platine”, laakiin waxaan u maleyneynaa inay ka dhalanayso ereyga Faransiiska ah “Plaqué” ama erayga Ingiriisiga ah “Plated”, oo macnaheedu yahay in dahab ka sameysan Cambodia lagu daboolay bir qaali ah , halka ay ku jiraan bir ka raqiisan gudaha. Waxaan u maleyneynaa in macnaha uu isbeddelay waqti ka dib.
Xaqiiqdii, dadka reer kamboodiyaanka ah waxay adeegsadaan magaca asalka Faransiiska "Chromé" si ay uga hadlaan dahabka dahaarka leh.
Dhageysiga sharraxayaasha iibiyaasha, qiyaasta platinum-ka caadiga ahi waa platinum lambarka 3. Maxaa loola jeedaa 3 / 10 dahab ah, ama dahab 30%, ama 300 / 1000 dahab ah.
Xaqiiqdii, dhammaan tijaabooyinkeennii waxay keeneen wax ka yar dahabka '30% dahabka', oo sidaad u aragto xagga hoose, celcelis ahaan waa 25.73%. Tani waxay ku kala duwanaan kartaa boqolkiiba dhowr inta u dhaxaysa dukaamada kala duwan, iyo inta badan boqolkiiba inta xitaa ku kala duwanaan kara dahabka isla dukaanada.
Waxaa tijaabiyay: Tamarta Faafinta X-Ray Fluorescence (EDXRF)
60.27% naxaas ah
Haddii aan isbarbar dhigno tirooyinkaan heerarka caalamiga ah, waxay macnaheedu tahay inay tahay dahab dahab ah oo loo yaqaan '6K gold or 250 / 1000 dahab
Tayada birtaani kama jirto dalal kale, maxaa yeelay tirada ugu yar ee dahabiga ah ee loo isticmaalo heerarka caalamiga ah waa 37.5% ama 9K ama 375 / 1000.
Dhageysiga sharraxayaasha iibiyaha:
Tirada Platinum ee 5 ayaa loo maleynayaa inay ka dhigan tahay 5 / 10 dahab ah, ama 50%, ama 500 / 1000.
Tirada Platinum ee 7 ayaa loo maleynayaa inay ka dhigan tahay 7 / 10 dahab ah, ama 70%, ama 700 / 1000.
Laakiin natiijada ayaa ka duwan
42.96% naxaas ah
44.56% naxaas ah
Lambarka 5, natiijadu way ka yar tahay sida ay ahayd inay ahaato, laakiin waa la aqbali karaa, si kastaba ha noqotee, farqiga ayaa u muuqda lambarka 7.
Boqolkiiba dahabku waa isku mid inta u dhaxaysa tirada 5 iyo 7, laakiin midabka birta ayaa ka duwan. Runtii, adoo beddelaya saamiga naxaas, qalinka iyo zinc, midabka birta isbeddelaya.
Baahidu way yar tahay tirada platinum-ka 5 iyo 7. Waxyaalaha qurxinta ayaa sida qaalibka ah lagu iibiyaa sidii alaabada caadiga ah ee Kaamboodiya. Inta badan waa lagama maarmaan in la dalbado sidaa darteed jijimadu waxay naqshadeeyaan dahabka gaar ahaan macaamiisha.
Tirada Platinum ee 10 waa dahab saafi ah, maadaama loo maleynayo inuu yahay 10 / 10 oo dahab ah, ama 100% dahab ah, ama 1000 / 1000 oo dahab ah.
Laakiin xaqiiqda, lambarka platinum 10 ma jiro, maxaa yeelay markaas, dahab saafi ah ayaa loogu magac daray "Meas".
Cambodia vs heerarka caalamiga ah
Marka la barbardhigo heerarka caalamiga ah, Platinum Cambodian wuxuu u dhigmaa dahabka cas. Alloy waxay ka kooban tahay tiro badan oo naxaas ah. Sidoo kale waa habka ugu jaban ee loo sameeyo dahabka, maxaa yeelay naxaasku aad ayuu uga jabanyahay biraha kale ee loo adeegsado aluminiinta dahabka ah.
Dahabka jaalaha ah ee heerka caalamiga ah waxaa ku jira naxaas aad u yar laakiin aad uga badan dahabka dahabka.
Dahabka guduudan waa dhexdhaxaad udhaxeeya dahabka jaalaha ah iyo dahabka guduudan, sidaa darteed waxay ka kooban tahay naxaas ka badan dahabka jaallaha ah, laakiin naxaas ka yar dahabka cas.
Macluumaadka soo socdaa way ku kala duwanaan karaan min dukaan kale.
Waxay u muuqataa in qaar ka mid ah kuwa dahabka ah ee reer Kambodiya ay ka warqabaan in qaabkoodu yahay mid tayo liita oo weliba ay jiraan heerar caalami ah.
Waxaan maqalnay "Meas Barang", "Meas Italy", "Platine 18" ..
Magacyadan oo dhan waxay yeelan karaan macnayaal kala duwan. Iibiyaasha mid walbana wuxuu leeyahay sharaxaad kala duwan.
"Meas Barang" macnaheedu waa dahab qalaad
"Meas Italy" macnaheedu waa dahab Talyaani ah
"Platine 18" macnaheedu waa dahab 18K
Laakiin wixii aan ka maqalnay, magacyadan mararka qaarkood waxay sharraxayaan tayada birta, mararka qaarkood tayada dahablaha ee shaqada. Marka laga hadlayo lambarka platinaum 18, macno malahan marka lala barbardhigo tirooyinka kale maxaa yeelay waxay ka dhigan tahay inay tahay 180% dahab saafi ah.
Ganacsiga dahabka Platinum
Nidaamka bangi waa mid xasiloon oo ku cusub Cambodia. Dadka reer Kambodiya dhaqan ahaan waxay lacagtooda ku maalgashadeen dhismaha guryaha sida maalgashiga muddada dheer. Oo waxay u soo iibsadaan dahabka sida mid gaaban ama mid dhexdhexaad ah si ay uga fogaadaan inay lacagtooda u isticmaalaan si aan loo baahnayn.
Dabcan, dadka badankood ma haystaan ​​miisaaniyad ay wax ku maal gashadaan, laakiin isla marka ay heystaan ​​waxoogaa yar oo lacag ah oo keyd ah, waxay iibsadaan guntin platinum, silsilad ama giraan.
Caadi ahaan, qoys walbaa wuxuu galayaa dukaan isku mid ah maxaa yeelay waxay aaminaa milkiilaha.
Dadka intiisa badani ma fahmaan waxa ay iibsanayaan laakiin runti dan kama lihi maxaa yeelay labada wargelin ee ay rabaan inay ogaadaan waa:
Waa immisa xeebtu?
Imisa Jeelerku wuxuu soo iibsan doonaa dahabka markay dib u baahan doonaan lacag?
Celcelis ahaan, jewelerku wuxuu dib u iibsadaa dahabka platinum-ka caadiga ah ee qiyaastii ah 85% qiimahooda asalka ah. Tani waxay ku kala duwanaan kartaa dukaanka
Macaamiil kaliya waa inay soo celiyaan dahabka iyagoo wata qaansheegadka si markiiba loogu bixiyo lacag caddaan ah.
Waa maalgashi wanaagsan. Way fududahay in lagu kasbado dhowr jeer lacag isla shey
Macaamiisha waa daacadda maxaa yeelay kuma iibin karaan dahabkooda dukaan kale oo ku yaal Cambodia
Waxaad ubaahantahay lacag badan oo gacanta ah si aad dib ugu iibsato dahabka macaamiisha. Waa khatar waana soo jiidan kartaa tuugada. Gaar ahaan ciidaha ka hor, markay macaamiisha oo dhami isku wakhti yimaadaan maxaa yeelay waxay u baahan yihiin lacag ay ku tagaan gobolkooda.
Shaqo adag oo maalinle ah maxaa yeelay madaxdu waa inuu kaligiis maareeyo bakhaarka. Ma jiro shaqaale u qalma shaqadan
Way fududahay in lacag dib loo soo helo
Ha u baahnayn inaad khabiir noqotid
Lacag ayaad luminaysaa markii aad dib u iibiso
Haddii aad lumiso qaansheegta, wax walba waad lumisaa
Dib ugama iibin kartid dukaan kale
Wax walba sifiican ayey usocdaan ilaa iyo inta dukaanka uu furanyahay. Laakiin haddii dukaanku xirmo, maxaa xigi doona?
Halkee laga iibsadaa Khmer platinum?
Waxaad ka heli doontaa meel kasta, suuq kasta oo ku yaal magaalo kasta oo ka tirsan Boqortooyada Cambodia.
Ma iibinaa Khmer platinum?
Nasiib daro Maya.
Waxaan kaliya iibinaa dhagxaanta dabiiciga ah iyo biraha qaaliga ah ee la caddeeyay ee heerarka caalamiga ah.
Waxaan sidoo kale bixinnaa naqshadeynta iyo sameynta dahabkaaga caado ka sameysan bir kasta oo qaali ah, iyo tayo kasta, oo ay ku jiraan Platinum dhabta ah.
Waxaan rajeynaynaa in daraasaddeenu ay waxtar kuu lahayd.
Waxaan rajeynayaa inaan dhowaan kugula kulmo dukaankayaga.